Seho Anime 24 tsara indrindra amin'ny Netflix - Tsy maintsy jerena - Fialam-Boly
Seho Anime dia andian-tantara amin'ny fahitalavitra Japoney. Rehefa nanomboka nandefa fampisehoana anime malaza be dia be i Netflix, dia miakatra sy miakatra ny fironana sy ny hatsikana. Ny olona dia mitodika any amin'ny anime amin'ny ankapobeny. Ary marina koa izany. Ny tiako holazaina dia miaraka amin'ireo tantara mahafinaritra rehetra, olo-malaza tsy fantatra, sarimiaina mahavariana, hafatra manentana, sehatra ady manaikitra fantsika, ary tantaram-pitiavana mahafinaritra, iza no tsy ho tia azy? Izahay dia nikarakara ny sasany amin'ireo seho anime tsara indrindra azo alaina ao amin'ny Netflix izay afaka mampiala voly anao amin'ny fotoana rehetra tianao.
Anime dia toy ny nofinay ary ny eritreritsika dia entina eo alohantsika ho toy ny vinavina. Tetikasa, andian-tantara tena misy izay tsy afaka nanome antsika velively, fa tsy manana an'io mampiavaka io farafaharatsiny.
Fa andraso, araka izay vao nolazainay fa misy andian-tantara anime maro dia maro ao amin'ny Netflix izao, izay midika fisafotofotoana be amin'ny fitadiavana izay tsara indrindra ho anao. Ary iza no mahalala fa mety hiafara amin'ny fizarana fizarana andiany 8-10 amin'ny andian-tantara iray izay manambara taty aoriana fa tantara tsy dia mahaliana loatra ianao.
Mitonia! Nalaminay ho anao izany rehetra izany. Ity misy lisitr'ireo seho anime 24 tsara indrindra izay tsy vitan'ny malaza fa manana lohahevitra tsara koa. Vakio àry ary havaozy izao ny lisitry ny fiambenana.
Mikasa ny hijery seho Anime? Taratasim-bola Toerana fizarana Anime tsara indrindra avy amin'ny faritra bilaoginay.
Seho Anime tsara indrindra amin'ny Netflix:
Navoaka tamin'ny 2007, ity andiany ity dia tantaran'ny zazalahy kamboty iray antsoina hoe Naruto Uzumaki. Am-polony taona lasa izay dia nisy ady an-tany niaraka tamin'ny amboahaolo nisy rambony sivy nanafika ny tanàna ary ninja no nanao sorona ny ainy ary nampidirina am-ponja tao am-pasan'i Naruto fony izy zazakely. Ary ankehitriny ny tanjon'i Naruto tokana dia ny ho tonga Hokage (mpitarika ny tanànany, Village Hidden Leaf Village).
Ny sasany amin'ireo dinika toa'Mandra-pahatongako ho lasa Hokage, na inona na inona ho avy, tsy ho faty aho ', mampiseho ny fahavononan'ny Naruto sy ny fifantohany ary nanentana anao koa ho an'ny andiam-piainanao.Ny andiany dia feno filaharana hetsika, hatsikana ary, noho izany, iray amin'ireo malala indrindra. Manana fizaran-taona 5 ihany i Netflix, samy manana fizarana 4.
Rating IMDB-8.3 / 10
Zazalahy kely iray antsoina hoe Gon Freecss dia mahatsikaritra fa nandao azy ny rainy mba ho lasa mpihaza ary mbola velona. Noho izany dia mametraka ny tenany amin'ny iraka ho mpihaza koa izy ka mila mandalo fitsapana fihazana. Ity zavatra 'fitsapana mpihaza' ity dia toy ny iraka hamono tena ary feno fientanam-po sy traikefa nahafinaritra tianao ho hita rehetra.
Io dia tsy maintsy jerena indray ho an'ny olona rehetra mijery anime ho an'ireo zava-niainana tsy azo antoka sy manaikitra fantsika ireo.Netflix dia manana vanim-potoana 4 amin'izao fotoana izao ary ny vanim-potoana faha-5 dia alefa amin'ny martsa 2021.
Naoty IMDB -8.6 / 10
3. Fanamarihana momba ny fahafatesana
Indray andro ny mpianatra amin'ny lisea iray antsoina hoe Yagami dia mahita kahie nosoratana ho toy ny 'fanamarihana ho faty'. Ankehitriny io kahie io dia manana fahefana fa izay anaran'izay hosoratana ao anaty kahie dia ho faty ao anatin'ny 40 segondra. WHOAH! Ie, nitovy izahay.
Ity andiany ity dia manana tombony amin'ny fananana teti-dratsy miavaka sy fanentanana lehibe. Any amin'ireto mbola gaga antsika momba ny zava-misy marina an'io kahie io dia nanapa-kevitra i Yagami fa hampiasa io kahie io hanadiovana izao tontolo izao amin'ny ratsy.Andalana tantara ankasitrahana miaraka amina hafatra.Eny, navoaka ny DEATH NOTE tamin'ny 2006 ary Netflix izao dia manana vanim-potoana 1 ahitana fizarana 37 ao aminy, izay heverinay fa ampy ho an'ny fizarana fizarana fizarana.
Naoty IMDB -9/10
Mpankafy fanatanjahan-tena ve ianao (volley manokana) ary mpankafy anime koa?Avy eo HAIKYU no safidy mety indrindra ho anao. Ny tantara dia mihodinkodina eo amin'i Hinata izay te-ho mpilalao volley tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fifehezana ny fahaiza-manao rehetra avy amin'ny mpanazatra azy.
Feno hafanam-po, angovo, hery, finiavana ary faniriana, Haikyu dia manome anao fiampangana tsara ao anatin'ny vanim-potoana 3 misy ao amin'ny Netflix, ary ny fizarana faha-4 eny an-dàlana koa.
Naoty IMDB -9.2 / 10
5. Lehilahy iray
Ianao ve mpankafy ireo sarimihetsika mahagaga amerikanina rehetra? Avy eo dia misy zavatra mety aminao koa ny anime Japon. Ilay 'One-Punch Man', io mahery io (Saitama) mahery kely fotsiny noho ilay mety noeritreretinao azy. Afaka mamarana ireo olon-dratsy amin'ny paompy iray monja izy. Ie, hery lehibe izany.
Mazava ho azy fa manana ny sehatra ady miavaka rehetra izy ary tohanan'ny hatsikana ampy handrakofana ny maha-tsiky anao.Ary koa, parody shounen mahazatra izy io. Vaovao tsara ho an'ireo mpankafy shounen tokoa!
Naoty IMDB -9.5 / 10
6. ALKEMISTA FENO FENO: RAHALAHY
Andian-dahatsoratra ahitana fihodinam-bokotra mahatalanjona, sehatra hatsikana farany, tantara an-tsarimihetsika tsara, tsiambaratelo maizina, ary sarimiaina mamokatra no tena ilainao izao.Tantaran'ny mpirahalahy roa, Edward Elric sy Alphonse Elric izay manandrana manome aina ny reniny maty miaraka amin'ny fanampian'ny alchemy voarara sasany miatrika andiana hetsika, miatrika ny tsiambaratelo maizin'ny fireneny ary mahatohitra fahasimbana ara-batana lehibe.
Tian'ny olona izy ary raha nitantara ny tantara izahay dia tsy misy dikany. Amin'ny alalàn'ny Netflix anao dia vanim-potoana 5, azo antoka fa hanokana ity faran'ny herinandro ity ianao ho an'ny FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD.
Naoty IMDB -9.1 / 10
7. NY FAHOTANA MATY FITO
Ny fahotana mahafaty fito dia vondron'olom-borona 7 izay mpanao heloka bevava mihosin-dra 7 izay nahavita fahotana be dia be. Notarihin'i Mliodas ny vondrona ary noho ny fangatahan'i Elizabeth, zanakavavin'ny liona, ity vondrona ity dia miantsoroka ny famonjena ny fanjakana liona.
Ny fitakiana tohin'ny hetsika maro araka ny tondroin'ilay anarana, mazava ho azy, dia manana tantara an-tsehatra anime, fihetsem-po ary fotoana mampitomany be izy.Manarona ny vanim-potoana 4 ianao izao ary hanome anao ny vanim-potoana faha-5 i Netflix amin'ny May 2021 azo antoka.
Naoty IMDB -8.1 / 10
Ity andiany ity dia naverina tamin'ny taona 2012 ary nanomboka teo dia nanana fizarana maro izy. Miorina amin'ny andiany mitsambikimbikina 'shonen' ary manome anao fanangonana vanim-potoana 3 i Netflix miaraka amina fizarana 26 isaky ny salan'isa.
Joseph Joestar no mpilalao voalohany ary ny andian-tantara dia manana fonosin-tsarimihetsika anime mahazatra, izay rehetra tadiavinay, mampiseho ny adim-piainan'i JoJo, ny tolona ho an'ny herin'ny maizina, ary ny faratampon'ny rà. Tantara maivana izany, tsy dia manana tantara an-tsehatra betsaka fa miolakolaka. Ny zavatra rehetra mitambatra dia mahatonga azy io ho famantaranandro tsara sy mahafinaritra.
Naoty IMDB -8.4 / 10
9. NY FIAINANA SADY INDRAY SAIKI K.
Saiki K., ilay mazoto amin'ny tantara dia zazalahy kely te hiaina ny fiainany am-pilaminana nefa manana hery matanjaka ara-tsaina mahatsikaiky. Izy dia afaka mifehy ny afo, manamboatra zavatra, mamaky zavatra, mamaky saina sns ... Tsy mahery fo mahazatra anao izy fa tsy olona mahery setra noho ny olombelona, ​​araka ny iantsoan'ny taonarivo.
Ny andiany dia nalefa tao amin'ny Netflix tamin'ny faran'ny taona 2019 satria NY FIAINANA LEHIBE SAIKI K. NORAORANA. Netflix dia manana vanim-potoana 3 amin'ny andiany voalohany ary vanim-potoana 1 amin'ny andiany nateraka indray. Fonosina miaraka amina endri-tsoratra mahafinaritra, mahafatifaty ary mahatsikaiky, hatsikana tsara, fikolokoloana sci-fi, sary mihetsika mandroso ity andiany ity indray dia mendrika toerana tsara amin'ny lisitra fijerinao.
Naoty IMDB -8.3 / 10
10. PIECE IRAY
Dragon Ball Z dia iray amin'ireo andian-tantara anime tranainy indrindra mety ho niarahantsika nahita tamin'ny fahazazantsika. Sa tsy izany? Ary toy izany koa ny 'One Piece' izay navoaka tamin'ny taona 1999 ary avy amin'ny studio an'ny Dragon Ball Z.
Ny mahery fo, Monkey D., dia jiolahin-tsambo iray ary te-ho Mpanjakan'ny piraty. Ary noho izany dia mila mahita ilay harena miafina izy. Eny, miahiahy ianao fa marina, hisy ny fikatsahana advento sy mampientam-po izay hanome anao tohiny feno fahendrena.Amin'izao fotoana izao dia misy vanim-potoana 23 ary fizarana 741 amin'ny Netflix Japoney. Ankehitriny dia mahafinaritra be ny mijery azy.
Naoty IMDB -8.7 / 10
11. EVANELION NEON GENESIS
Te hanana andian-tantara sci-fi, robotic, feno hetsika ve ianao? Nandre anao izahay. Neon Genesis Evangelion dia tantara iray izay ananan'i NERV robot goavambe antsoina hoe Evangelions ary tsy maintsy miady amin'ny anjely mahery vaika izy ireo.
Ao anatin'ny fizarana 26 an'ny Neon Genesis Evangelion, dia tsy ny fotoana manaitaitra sy manaikitra fantsika ihany fa misy tantara an-tsehatra maro koa mba hahatonga ny masonao ho reraka amin'ny fotoana sasany. Ny ahiahy mitohy dia hahatonga anao hijanona hatramin'ny farany.
Naoty IMDB -8.5 / 10
Madoka dia zatovo 14 taona tsara tarehy sy tsotra, izay miaina am-pilaminana ny fiainany miaraka amin'ny sakaizany akaiky indrindra, Sayaka Miki raha indray andro dia nisy zavamiaina saka iray nanatona azy ireo ary nanolo-tena hanatanteraka ny faniriany tokana nefa amin'ny vidiny samy hivadika ho tovovavy majika izy roa.
Toa tantara mahafatifaty sy mahafinaritra ity, saingy feno tantara an-tsehatra, haizina ary hetsika matotra sasany. Ny andiany dia manome hafatra momba ny finamanana, fanantenana ary ny fomba ilain'ny nofinofy vidiny iray.
Andian-tsarimihetsika anime hafa mampihetsi-po? Eny, izany no atao hoe anime fa ity iray ity dia mifandray be amin'ny fiainantsika marina. Io no fomba mahatonga ny zazalahy atao hoe Akira lasa devoly, demonia iray izay tsy maintsy miady amin'ny faharatsian'izao tontolo izao sy ny tenany fa saingy ankoatr'izany rehetra izany dia mbola mitondra fon'ny olona iray ary koa mitondra ny fahatsapana.
Feno hery, fandatsahan-dra mavitrika ary fientanam-po, dia maneho ny fomba mbola hitomanian'ny vatan'ny devoly. Manapaka ny fenitry ny patriarika rehetra amin'ny zazalahy matanjaka izy io.Izy io koa dia mirakitra drafitra miorina amin'ny zava-mahadomelina marobe koa izay mahatonga azy ho andian-dahatsary misy lohahevitra olon-dehibe.
Naoty IMDB -7.6 / 10
14. VONJY I LA KILL
Kill la Kill dia mitondra karazana storyline vaovao. Ryuki dia eo am-pikarohana ny mpamono olona an-drainy ary mifanena amin'i Satsuki izay mpandova ny fanjakan'ny lamaody reniny sy ny filohan'ny filankevitry ny akademia honnouji, izay manana fanamiana matanjaka antsoina hoe Goku Uniforms ihany koa.
Raha vaovao ny teti-dratsy, vaovao ny tantara, masiaka ny endri-tsoratra, ary ny hetsika mahafaty, mahery vaika, mahatsikaiky, ary somary erotika, tantara vaovao mahafinaritra ny manome tifitra.
Naoty IMDB -7.9 / 10
Tsara ho an'ny fialantsasatra amin'ny andian-tantara mitohy miady, manaraka amin'ny fantsom-pifandraisana dia manana andiana zava-misy, mahafatifaty, mahafinaritra ary mozika ianao.Retsuko dia panda mena 25 taona izay miasa amin'ny orinasam-barotra amin'ny maha-mpitantan-draharahan'ny kaonty ary tena asa mandreraka fanahy, mandreraka, toa ny fahafatesana tokoa io asa io. Toeram-piasana mahazatra miaraka amin'ny hiantsoantsoan'ny lehibeny, ny ati-doha mipoaka, ary ny vatana sorena. Tsy toa ny tantarantsika koa ve ity? Rentsika ny alahelonao!
Saingy manana ny fomba famoahany ny hatezerana izy, mihira ao amin'ny fisotroana karaoke izy amin'ny alina antsoina hoe 'Heavy Metal'.Io dia toy ny andian-tantara PERFECT noho ny fialana sasatra ny andronao. Tsy misy adin-tsaina, tsy misy tantara an-tsehatra, maivana fotsiny, mahafinaritra, hatsikana, isan'andro toy ny tantara, miaraka amin'ny endri-tsoratra mahafinaritra tsy zaka.
Naoty IMDB -8/10
Tantaran'ny mpirahalahy roa, Simon sy Kamina. Simon, zazalahy kely saro-kenatra, ary Kamina, olona tsy mandady saina. Samy mipetraka amin'ny vohitra ambanin'ny tany izy roa, ary nahita karazana vakoka ara-tantara manan-danja iray ary nanaram-po tamin'ny ady sasany.
Eny, tsy hanome mpanimba anao izahay.Vaovao, mahaliana, matanjaka, masiaka, ary mahatsikaiky indraindray ny teti-dratsy. Manana fizarana 27, ary raha andiany kely dia azo antoka fa ao amin'ny lisitry ny fiambenana anao izany.
Samy efa hitantsika daholo ny maha samy hafa ny oniversite virtoaly. Fa ny Akademia tsy miankina Hyakkaou no akademia samihafa indrindra mety ho hitanao.Ny sendikan'ny mpianatra no mitondra azy, ny fanatanjahan-tena ihany no filokana, ny mpianatra dia laharana arakaraka ny fahaizany miloka ary raha misy tsy te hilalao dia horoahina fotsiny izy ireo.Ny tsikombakomba tsy mahazatra dia izay mahatonga ireo andian-tsarimihetsika 2 efa za-draharaha ireo ho be mpitia.
Naoty IMDB -7.2 / 10
Mila fanazavana mihitsy ve ity andiany ity? Raha ny ara-bakiteny, isika rehetra, okay 90% farafaharatsiny, dia nahita an'io nandritra ny fahazazantsika. Pikachu, izay pokemon voalohany an'i Ash ary sakaiza malalany sy sakaiza akaiky indrindra dia miaraka amin'i Ash amin'ny diany rehetra.
Fitsangatsanganana feno Pokemons hafahafa sy tsy fahita firy nefa mahery vaika miaraka amin'ny Pokeballs sy PokeWars manao ny mpandresy laharana ambony noho ny ambony.Ny tohiny maivana, hatsikana ary hetsika no mahatonga ny andiana Pokemon ho malaza amin'izao fotoana izao.
Naoty IMDB -7.5 / 10
19. ACADEMIA mpamosavy kely
Fantatray fa amin'ny fandrenesana ny akademia mpamosavy dia ampahatsiahivin'i Harry Potter sy Hogwarts ary Dumbledore ianareo rehetra. Saingy tsy mitovy izany, voalohany ity dia ny anime, faharoa, ny tantaran'ny tovovavy iray antsoina hoe Akko izay avy amin'ny tany tsy majika ary noho izany dia mila miasa mafy, mafy be mba hahatanteraka ny famosaviana sy ny majikany.
Andian-tantara maivana sy mahatsikaiky toy izany no jerena. Miaraka amin'ny vazivazy rehetra, Akko mampiasa ny tsipelina diso isaky ny avy ary manova ny sakaizany ho zavatra hafahafa, endri-tsoratra mahafinaritra, ary fototra mampihomehy, azo antoka fa tsy maintsy jerena izany.Ary koa, ny vanim-potoanan'ny akademia fiambenana kely dia ao amin'ny Netflix.
20. NY LAINGA ANAO APRILY
Ity tantara ity dia navoaka tamin'ny 2016 ary nanomboka tamin'izay dia andian-tantara malaza anime.Tantaram-pitiavana mahafatifaty eo amin'i Kousei Arima sy i Kaori Miyazono. Kousei no mpilalao fototra ary mpitendry piano. Torotoro izy rehefa maty ny reniny ary tsy afaka mihaino naoty mozika intsony izy. Saika nahafoy mozika izy rehefa niditra teo amin'ny fiainany i Kaori, mpitendry lokanga. Maka azy izy, mandrisika azy, manangana azy indray ary manome fanombohana vaovao ho azy.
Ity dia tantara madio, be fitiavana ary mahasarika toy izao izay tena hahatsapanao fa tiana sy mitsiky ianao aorian'izany. Satria manana fihetseham-po mampihetsi-po ihany koa ilay teti-dratsy, araho miaraka ny kofehinao.
21. MIPETSIKA JAPON
Ity iray ity dia mifototra amin'ny tantara malaza nosoratan'i Sakyo Komatsu, navoaka tamin'ny 1973. Tantara momba ny loza izany. Ity andiany ity dia mampiseho ny fiainam-pianakaviana tsotra iray manao zavatra tsotra miova rehefa tampoka dia tratry ny loza voajanahary i Japon.
Ary ity fianakaviana ity dia mila miady amin'ny zava-drehetra, tsy hahazoana fahefana na fanajana na faniriana, fa mba ho velona hatrany ary ady amin'ny natiora reny izany.Mampiseho ny fahapotehan'ny fiainana raha misy ny loza tokana ary ny zavatra mety ho potipotika raha toa ka misy andian-tantara.
Tantaran'ny fanantenana, ady, finiavana, fitiavana ny mpianakavy, hery, fahasiahana ary tolona ho tafavoaka velona io.Azo antoka fa famantaranandro tsara io rehefa efa mijaly mafy isika. Manome hery be dia be antsika hiadiana amin'ny loza isan-karazany.
Naoty IMDB -6.5 / 10
Violet dia tovovavy miaramila taloha. Ary io ady io dia nandany ny sandriny sy ny fivoarany ara-pihetseham-po tamin'ny fahazazany. Ary izao dia misafidy ny hanoratra izy satria mandalo ny traumatiem-panahy mandrakizay.Ny mijery ity andiany ity dia mandeha amin'ny fiaran-dalamby mampihetsi-po. Fiaran-dalamby manana hery ampy hampitomany anao amin'ny fotoana iray.
Ny tanànan'ny olombelona dia rava tsirairay avy amin'ny olona goavambe antsoina hoe Titans. Ka ny iray amin'ireo tanàna dia manangana manda lehibe hanakanana ny Titans. Saingy manararaotra ny habeny izy ireo, manimba ny rindrina ary mandrava ny tanàna.Avy eo dia nisy zaza roa tafavoaka velona. Fa ny fahitana ny olon-tiany maty eo alohany, dia mandrehitra ny afon'ny valifaty ao aminy.
Rehefa ho hitanao ireo ankizy miady amin'ireo goavambe ireo, rehefa lehibe ny ankizy, ianao koa ho heniky ny fihetsem-po be. Ianao koa dia hahatsapa ny hazavana hamaly faty, hiady sy handrava ny Titans satria toy izany ny herin'ity andiany ity.
Hisitraka anao ao izy ary hahatonga anao hifikitra amin'ny faran'ny andiany.Tsy lazaina intsony ny mozika, izay mampiankin-doha fotsiny!Izy io dia iray amin'ireo andian-tantara tiana indrindra.
Naoty IMDB -9.7 / 10
Miorina manodidina an'i Baki Hanma, tompon-daka eran'izao tontolo izao amin'ny haiady ambanin'ny tany. Te handresy ny rainy izy ary ho lasa olona matanjaka indrindra eto an-tany. Fa avy eo dia fantany fa tsy maintsy miatrika gadra maty 5 maty izy.
Tsy ho andian-hetsika mahazatra ity fa satria misy ny lova navoakan'i Japon, ny haiady, dia ho andian-kery feno fifandonana feno tantaram-pahefana nofehezina.Ny fahitana ny tanjaka sy ny angovo toy izany dia sady ho gaga ianao no ho gaga. Ny ady haiady vita martial napetraka tsy misy fitsipika dia mahafinaritra an'ireo mpankafy ady amin'ny ady.
Miaraka amin'ny Netflix manana fizaran-taona 3 sy fizarana 39 amin'ny totaliny, drafitra fijerena binge-tsara ho an'ny faran'ny herinandronao io.
Naoty IMDB -7.7 / 10
Rehefa avy niasa mafy nandritra ny herinandro ianao, dia mendrika ny fotoana hijerena bontolo. Ary miaraka amin'ireo andian-tsarimihetsika ankehitriny no be mpitia indrindra, dia nametraka lisitra tonga lafatra ho anao izahay izay mandrakotra ny ankamaroan'ny karazan-dahatsoratra anime.Manomboka amin'ny hetsika sy fiadiana amin'ny ady ka hatramin'ny tantaram-pitiavana mahafatifaty, avy amin'ny lohahevitra fanaonay isan'andro ka hatramin'izay drafitra tsy re mihitsy.
Na dia mahatsapa vazivazy ianao na mavitrika na tantaram-pitiavana na mora fotsiny, dia notanisainay ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fanaovana azy tsara.Alao izao ny mpampionona anao, ny sakafonao ankafizinao indrindra, vonoy ny jiro ary misitrika fotsiny.
KissAnime.ru Fomba hafa
Seho Anime tsara indrindra amin'ny Hulu
Iza moa i Niall Horan mampiaraka? Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao amin'ny 2022!
The New Psychological Thriller The Woman in the Window
fampiharana chromecast ho an'ny Windows 10
kaody hadisoana roblox 267 nodakan'ny mpizara
Kaody karatra fanomezana $ 500 amazon
fampiharana akaiky amin'ny iphone 4
https //www.netflix.com miditra